Mashape Inobatanidza Vanogadzira uye maAPI | Martech Zone
Mashape Inobatanidza Vanogadzira uye maAPI
Svondo, Kurume 2, 2014 Douglas Karr
Kwenguva refu kwazvo, goto rangu rekutsvaga APIs raive Zvirongwa zveWebhu - asi izvo zvinogona kunge zvachinja mushure mekuongorora Mashape. Mashape haisi nyore dhairekitori rinotsvaga reAPIs, rinotobatanidza iyo API zvakananga munzvimbo yavo yekuchengetera. Izvi zvinokugonesa kusaina, kutsvaga uye kuyedza iyo API pasina kunetseka zvachose.
Heino yavo runyorwa rwezvakanaka uye maficha:
Zvese munzvimbo imwechete - ongorora mapoka emaAPIs kuti ugone kutora, kusarudza, uye enzanisa maAPI munzvimbo imwechete.
Imwe Kiredhiti - Mashape anokupa iwe chitupa chekuti uwane maAPIs ese anodyiwa mumaapplication ako.
Batanidza neVagadziri - yakavakirwa-mukati mameseji uye yekunetseka-tikiti system yekufambisa kutaurirana pakati pevanogadzira
Edza Usati Wanyora - yakabatanidzwa API zvinyorwa uye test console zvinokutendera iwe kusangana ne API pasina kuzvipira.
njanji API kushandiswa - zvakadzika analytics, inotaura, zvikanganiso, uye kunyorera mashandisirwo emaAPI ako mazhinji munzvimbo imwechete.
Multiple Mutengi Raibhurari - Sarudza mutauro wechirongwa uye udonhedze raibhurari muchirongwa chako.
Kuparadzira Pakarepo - shambadza yako yeruzhinji API uye inova inowanika kuzviuru zvevanogadzira vanogadzira. Iwe unogona zvakare kuwedzera yakavanzika API uye shanda pamwe chete mukati mesangano rako.
zvinenge API Doc Mupepeti - gadzira kana gadzira yako yakavanzika kana yeruzhinji zvinyorwa, zvichigonesa vanogadzira kuti vakurumidze kunzwisisa uye kushandisa API yako.
Nharaunda Dzakaburitswa Nyaya - Gadzira, utaure, uye uteedzere API kuburitsa kuzivisa bugs kana malfunctions.
Nyore Kuita Mari APIs - Ipa sarudzo dzeveruzhinji kana dzakavanzika zvekubhadhara. Iwe unogadza ese paramende emitengo, senge mafoni kana zvinhu zvakasarudzika; pamwe nekugona kwekugadzira akawanda marongero uye maficha seti.
Mamiriro eAPI uye Notification - tarisa chinzvimbo cheAPI, inosanganisira yayo yepakati latency uye yekukwira muzana muzana. Isu tinotumira Notices dzenyaya uye mashandiro ekuita.
Administrative Ongororo - nhamba ye API kufona, kutorwa mwero wevagadziri vachishandisa API yako, uye huwandu hwemhosho.
Tags: APIapiskunyorera programming interfacetsvaga api
Yakakura Sei Tumblr?
ZvemukatiVerse: Gwaro manejimendi uye Workflow Automation